Carl Bildt: waa in la baaraa eedeymaha hubka sunta ee Suuriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carl Bildt: waa in la baaraa eedeymaha hubka sunta ee Suuriya
La daabacay torsdag 22 augusti 2013 kl 09.56
Dagaalka sokeeye ee ka taagan dalka Suuriya ayaa yeeshey waji cusub kadib markii ay shaley soo baxeen warar sheegaya in rajimka dalkas is-ticmaaley hubka sunta ah nerv-gaska. 30 dal oo ku jirto Iswiidhen ayaa dalbanaya in QM baaritaan ku sameeyo eedeymaha ku sabsan is-ticmaalka hubka sunta ah ee lagu eedeynayo xukumada Suuriya.
Carl Bildt wasiirka arimaha dibada oo saakey u waramayey laant p1-Morgon ee ka baxda raadihaya Iswiidhen ayaa ku baaqey in sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaan loogu sameeyo eedeymahan.
- Waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo baaro, sida loo sameyanyo waxaa looga fadhiyaa xog-haya guud ee QM. Waxaan rijeynayaa in taas ay soo baxdo maanta. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in rajimka Suuriya ogalaado arintan, ayuu yeri Carl Bildt wasiirka arimaha dibada Iswiidhen. Hadii la xaqiijiyo in la is-ticmaaley hubka sunta ah ayuu Carl bildt sheegey in markas xaalado is-badeleyso oo culeyska ah in wax laga qabto uu kordhayo.
Xukumada Suuriya ayaa inkirtey eedeymahan ah in ay u is-ticmaaleen hubka sunta ah dagaalka ay kula jirto mucaaradka ku kacsan maamulka Al-assad. Shaley ayey aheyd markii warbaahinta lagu baahiyey sawiro muujinaya 30-meeyo qof oo dhulka dadsan ku waas oo la sheegey in rajimka ku laayey sunta nerv-gaaska.